Yehowa wɔ Ayamhyehye Ma Ne Nkurɔfo | Bɛn Yehowa
‘Yɛn Nyankopɔn Ayamhyehye’
1, 2. (a) Ɔkwan bɛn so na ɛna yɛ ne ba su ho biribi? (b) Nkate bɛn na emu yɛ den sen ɛna ayamhyehye mpo?
ABOFRA bi su anadwo dasu mu. Ne na sɔre ntɛm ara. Ɔnna hatee sɛnea ɔyɛ daa no—efi bere a ɔwoo ne ba no. Wasua sɛ obehu nea abofra no su biara kyerɛ. Enti, mpɛn pii na otumi hu sɛ ebia akokoaa no su no hwehwɛ sɛ ɔma no aduan, ɔka no fam ne ho, anaasɛ ɔyɛ biribi foforo ma no. Nanso, ɛmfa ho dekode a enti abofra no su no, ɛna no yɛ ho biribi. Ɔdɔ a ɔwɔ ma abofra no mma ontumi mmu n’ani ngu n’ahiade so.
2 Ayamhyehye a ɛna wɔ ma ne yafumma no ka tema a ɛsen biara a adesamma nim no ho. Nanso, nkate bi wɔ hɔ a emu yɛ den sen biara—yɛn Nyankopɔn, Yehowa, ayamhyehye. Su a ɔdɔ wom yi ho a yebesusuw no betumi aboa yɛn ma yɛabɛn Yehowa kɛse. Ɛnde, ma yensusuw dekode a ayamhyehye yɛ ne sɛnea yɛn Nyankopɔn da no adi no ho nhwɛ.
Dɛn Ne Ayamhyehye?
3. Hebri adeyɛ asɛm a wɔkyerɛɛ ase “hu mmɔbɔ” anaa “nya ayamhyehye” no kyerɛ dɛn?
3 Wɔ Bible mu no, ayamhyehye ne mmɔborohunu wɔ abusuabɔ a emu yɛ den. Hebri ne Hela nsɛmfua dodow bi twe adwene si ayamhyehye so. Sɛ nhwɛso no, susuw Hebri adeyɛ asɛm ra·chamʹ, a wɔtaa kyerɛ ase “hu mmɔbɔ” anaa “nya ayamhyehye” no ho hwɛ. Nhoma bi kyerɛkyerɛ mu sɛ adeyɛ asɛm ra·chamʹ “kyerɛ ayamhyehye a emu yɛ den te sɛ nea yenya bere a yehu wɔn a yɛdɔ wɔn paa anaa wɔn a wohia yɛn mmoa mmerɛwyɛ anaa wɔn amanehunu no.” Hebri asɛm yi a Yehowa de ka n’ankasa ho asɛm no ne asɛmfua a egyina hɔ ma “awotwaa” wɔ abusuabɔ, na ebetumi akyerɛ “ɛna ayamhyehye.” *—Exodus 33:19; Yeremia 33:26.
“So ɔbea werɛ befi . . ne yafumma?”
4, 5. Ɔkwan bɛn so na Bible de nkate a ɛna wɔ ma ne ba di dwuma de kyerɛkyerɛ yɛn Yehowa ayamhyehye ho ade?
4 Bible de atenka a ɛna wɔ ma ne ba di dwuma de kyerɛ yɛn sɛnea Yehowa ayamhyehye te. Yɛkenkan wɔ Yesaia 49:15 sɛ: “So ɔbea werɛ befi ne ba akokoaa, na ne yam renhyehye [ra·chamʹ] no ne yafumma ho? Sɛ eyinom werɛ befi po a, me de, me werɛ remfi wo.” Saa asɛm a ɛka koma no kyerɛ ayamhyehye kɛse a Yehowa wɔ ma ne nkurɔfo no. Ɔkwan bɛn so?
5 Ɛyɛ den sɛ wubesusuw sɛ ɛna bi werɛ befi sɛ ɔbɛma ne ba kumaa aduan na wahwɛ no. Anyɛ yiye koraa no, akokoaa ntumi nyɛ ne ho hwee; akokoaa hia sɛ ne na bɛhwɛ no na wadɔ no anadwo ne awia nyinaa. Nanso, ɛyɛ yaw sɛ yɛte sɛ ɛnanom pii bu wɔn ani gu wɔn mma so, titiriw wɔ saa “mmere a emu yɛ den” a nnipa ‘nni dɔ’ yi mu. (2 Timoteo 3:1, 3) Nanso, Yehowa ka sɛ: “Me de, me werɛ remfi wo.” Ayamhyehye a Yehowa wɔ ma n’asomfo no yɛ nea enni huammɔ da. Emu yɛ den koraa sen atenka biara a nnipa betumi anya—ayamhyehye a ɛna bi nya ma ne ba akokoaa no. Ɛnyɛ nwonwa sɛ sɛnkyerɛwfo bi kaa Yesaia 49:15 ho asɛm sɛ: “Sɛ ɛnyɛ eyi ne Onyankopɔn dɔ a ɛsen biara wɔ Apam Dedaw no mu a, ɛyɛ nea ɛsen biara no mu biako.”
6. Ɔkwan bɛn so na nnipa a wɔnyɛ pɛ pii abu ayamhyehye, nanso dɛn ho awerɛhyem na Yehowa ma yenya?
6 So ayamhyehye yɛ mmerɛwyɛ ho sɛnkyerɛnne? Nnipa a wɔnyɛ pɛ pii kura adwene a ɛte saa. Sɛ nhwɛso no, Romani nyansapɛfo Seneca, a ɔtraa ase Yesu bere so a na ɔyɛ nhomanimfo wɔ Roma no kyerɛkyerɛe sɛ “tema yɛ adwenem mmerɛwyɛ.” Na Seneca yɛ obi a ɔkamfo Stoafo nkyerɛkyerɛ, nyansapɛ a esi kommyɛ a tema nnim so dua kyerɛ. Seneca kae sɛ, onyansafo betumi aboa wɔn a wɔwɔ ahohia mu, nanso ɛnsɛ sɛ onya tema ma wɔn efisɛ nkate a ɛte saa remma onnya abotɔyam. Ahopɛ adwene a ɛte saa mma wonnya ayamhyehye mma obiara. Nanso, Yehowa nte saa koraa! Yehowa ma yɛn awerɛhyem wɔ N’asɛm mu sɛ ‘n’ayamye dɔɔso, na ɔwɔ ayamhyehye.’ (Yakobo 5:11, NW ase hɔ asɛm) Sɛnea yebehu no, ayamhyehye nyɛ mmerɛwyɛ na mmom ɛyɛ su a ɛkyerɛ denyɛ, na ɛho hia. Te sɛ ɔwofo a ɔwɔ ɔdɔ no, ma yɛnhwɛ sɛnea Yehowa da no adi.
Bere a Yehowa Daa Ayamhyehye Adi Kyerɛɛ Ɔman Bi
7, 8. Ɔkwan bɛn so na Israelfo huu amane wɔ tete Misraim, na ɔkwan bɛn so na Yehowa yɛɛ wɔn amanehunu no ho biribi?
7 Yehowa ayamhyehye da adi pefee wɔ sɛnea ɔne Israel man dii no mu. Eduu afeha a ɛto so 16 A.Y.B. mu no, na Israelfo ɔpepem pii yɛ nkoa wɔ Misraim, baabi a na wɔhyɛ wɔn so denneennen. Misrifo no ‘maa wɔn asetra fonoo wɔn wɔ dɔte ne ntayaa ho adwuma a ɛyɛ den ne afum adwumayɛ ahorow nyinaa, ne nnwuma horow nyinaa mu nyadi yayaw a wɔde dii wɔn mu.’ (Exodus 1:11, 14) Israelfo no su frɛɛ Yehowa hwehwɛɛ mmoa wɔ wɔn ahohia mu. Ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn a ɔwɔ ayamhyehye no yɛɛ n’ade wɔ ho?
8 Ɛkaa Yehowa koma. Ɔkae sɛ: “Ohu na mahu me man a ɛwɔ Misraim no amanehunu, na wɔn su a wɔn so ahwɛfo nti wosu frɛ no, mate, na mahu wɔn amanehunu.” (Exodus 3:7) Ná Yehowa ntumi nhwɛ ne nkurɔfo amanehunu anaa ontie wɔn sufrɛ a ne yam nhyehye no wɔn ho. Sɛnea yehui wɔ nhoma yi Ti 24 no, Yehowa yɛ Onyankopɔn a ɔwɔ tema. Na tema—hu a obi tumi hu afoforo yaw—ne ayamhyehye wɔ abusuabɔ. Nanso, Yehowa ante nka amma ne nkurɔfo kɛkɛ; ɛkaa no ma ɔyɛɛ ade maa wɔn. Yesaia 63:9 ka sɛ: ‘Ne dɔ ne n’ayamhyehye mu na ogyee wɔn.’ Yehowa de “nsa a ɛyɛ den” na egyee Israelfo fii Misraim. (Deuteronomium 4:34) Ɛno akyi no, ɔnam anwonwakwan so maa wɔn aduan gyee wɔn kɔɔ wɔn ankasa asase a ɛsow aba so.
9, 10. (a) Bere a Israelfo kɔtraa Bɔhyɛ Asase no so akyi no, dɛn nti na Yehowa gyee wɔn mpɛn pii? (b) Wɔ Yefta bere so no, nhyɛso bɛn ase na Yehowa gyee Israelfo no fii, na dɛn na ɛkaa no ma ɔyɛɛ saa?
9 Yehowa ayamhyehye no anso hɔ ara. Bere a Israelfo kɔtraa Bɔhyɛ Asase no so no, mpɛn pii na wɔanni nokware na ɛma wohuu amane. Nanso, na nkurɔfo no adwene ba wɔn ho so na wosu frɛ Yehowa. Na ogyee wɔn mpɛn pii. Dɛn ntia? “Efisɛ ne yam hyehyee no maa ne man.”—2 Beresosɛm 36:15; Atemmufo 2:11-16.
10 Susuw nea esii Yefta bere so no ho hwɛ. Esiane sɛ na Israelfo no akɔsom abosom nti, Yehowa maa Amonfo hyɛɛ wɔn so mfirihyia 18. Awiei koraa no, Israelfo no nuu wɔn ho. Bible ka sɛ: “Woyiyii anyame ananafo no fii wɔn mu, na wɔsom [Yehowa, NW]; na Israel amanehunu no yɛɛ ne kra ahometew.” * (Atemmufo 10:6-16) Bere a Yehowa nkurɔfo daa nokware ahonu adi no, na ontumi nhwɛ mma wonhu amane. Enti Onyankopɔn a ɔwɔ ayamhyehye no maa Yefta tumi ma ogyee Israelfo no fii wɔn atamfo nsam.—Atemmufo 11:30-33.
11. Ayamhyehye ho asuade bɛn na yenya fi sɛnea Yehowa ne Israelfo dii no mu?
11 Sɛnea Yehowa ne Israel man no dii no kyerɛ yɛn dɛn wɔ ayamhyehye ho? Ade biako ne sɛ, yehu sɛ ɛnyɛ tema kɛkɛ na onyae wɔ nkurɔfo no amanehunu no ho. Kae ɛna a ayamhyehye ka no ma ɔhwɛ ne ba a ɔresu nhwɛso no. Saa ara na Yehowa mmu n’ani ngu ne nkurɔfo sufrɛ so. Ayamhyehye a ɔwɔ no ka no ma ogye wɔn fi wɔn amanehunu mu. Afei nso, sɛnea Yehowa ne Israelfo no dii no kyerɛ yɛn sɛ ayamhyehye nyɛ mmerɛwyɛ ɔkwan biara so, efisɛ saa su pa yi kaa no ma ɔyɛɛ ade ntɛm so maa ne nkurɔfo. So Yehowa asomfo sɛ́ kuw no nkutoo na onya ayamhyehye ma wɔn?
Ayamhyehye a Yehowa Wɔ Ma Ankorankoro
12. Ɔkwan bɛn so na Mmara no daa ayamhyehye a Yehowa wɔ ma ankorankoro no adi?
12 Mmara a Onyankopɔn de maa Israel man no daa ayamhyehye a ɔwɔ ma ankorankoro no adi. Sɛ nhwɛso no, susuw sɛnea odwen ahiafo ho no ho hwɛ. Na Yehowa nim sɛ nneɛma a wɔnhwɛ kwan betumi asisi na ama Israelni bi adi hia. Ɔkwan bɛn so na na ɛsɛ sɛ wɔne ahiafo di? Yehowa hyɛɛ Israelfo denneennen sɛ: “Mpirim wo koma, na mmua wo nsa ano nhyɛ wo nua hiani. Yi wo yam ma no, na mma ɛnnyɛ wo koma ahi sɛ wobɛma no; na saa ade yi nti [Yehowa, NW] wo Nyankopɔn behyira wo, wo nnwuma nyinaa . . . mu.” (Deuteronomium 15:7, 10) Yehowa kɔɔ so hyɛe sɛ Israelfo no nntwa wɔn mfuw ano nnɔbae nyinaa nnwie anaasɛ wɔnnsesaw biribiara a ɛbɛka akyi no. Ná wogyaw mpɛpɛw a ɛte saa no ma ahiafo. (Leviticus 23:22; Rut 2:2-7) Bere a ɔman no dii mmara yi a ɛma wohu ahiafo a wɔwɔ Israel mmɔbɔ so no, wɔn a na ade ahia wɔn wɔ wɔn mu no ansrɛsrɛ aduan. So na ɛnyɛ Yehowa ayamhyehye a wɔda no adi?
13, 14. (a) Ɔkwan bɛn so na Dawid nsɛm no ma yenya awerɛhyem sɛ Yehowa dwen yɛn ho kɛse sɛ ankorankoro? (b) Ɔkwan bɛn so na yebetumi ayɛ mfatoho de akyerɛ sɛ Yehowa bɛn wɔn a wɔn “koma abubu” anaa wɔn “honhom apɛtɛw” no?
13 Ɛnnɛ nso, yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ dɔ no dwen yɛn ho kɛse sɛ ankorankoro. Yebetumi anya ahotoso sɛ ohu amanehunu biara a ebia yɛrefa mu no yiye. Odwontofo Dawid kyerɛwee sɛ: “[Yehowa, NW] ani wɔ treneefo so, na n’aso tie wɔn sufrɛ. [Yehowa, NW] bɛn wɔn a wɔn koma abubu, na ogye wɔn a wɔn honhom apɛtɛw.” (Dwom 34:15, 18) Ɛdefa wɔn a saa nsɛm yi fa wɔn ho no ho no, Bible ho sɛnkyerɛwfo bi ka sɛ: “Wɔyɛ wɔn a wɔn koma abubu na wɔanu wɔn ho, kyerɛ sɛ, wɔyɛ wɔn a esiane bɔne nti wɔabotow, na wɔahwere obu a wɔwɔ ma wɔn ho; wonni wɔn ankasa mu ahotoso.” Saafo no betumi ate nka sɛ Yehowa wɔ akyirikyiri, ɛne sɛ wɔnsɛ nnipa a ɛsɛ sɛ odwen wɔn ho koraa. Nanso, ɛnyɛ saa na asɛm no te ankasa. Dawid nsɛm no ma yenya awerɛhyem sɛ Yehowa nnyaw wɔn a “wɔahwere obu a wɔwɔ ma wɔn ho” no. Yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ tema no nim sɛ yehia no wɔ mmere a ɛtete saa no mu sen bere biara, na ɔbɛn yɛn.
14 Susuw asɛm bi ho hwɛ. Ɛna bi a ɔwɔ United States de ne babarima a wadi mfirihyia abien tutuu mmirika kɔɔ ayaresabea esiane nkɔnkɔn dennen bi a na ɔrebɔ nti. Bere a nnuruyɛfo hwɛɛ abofra no, wɔka kyerɛɛ ɛna no sɛ wobegye abofra no ato ayaresabea hɔ anadwo no. Ɛhe na ɛna no dae? Wɔ ayaresabea dan no mu akongua bi mu, ne ba no mpa ho pɛɛ! Ná ne babarima ketewaa no yare, na na ɛsɛ sɛ ɔbɛn no. Nokwarem no, yebetumi ahwehwɛ biribi a ɛsen saa afi yɛn soro Agya a ɔwɔ ɔdɔ no hɔ! Anyɛ yiye koraa no, wɔbɔɔ yɛn wɔ ne suban so. (Genesis 1:26) Dwom 34:18 mu nsɛm a ɛka koma no kyerɛ yɛn sɛ, sɛ yɛn ‘koma bubu’ anaa yɛn ‘honhom pɛtɛw’ a, Yehowa, te sɛ ɔwofo a ɔwɔ ɔdɔ no, ‘bɛn yɛn’—ne yam hyehye no bere nyinaa, na wayɛ krado sɛ ɔbɛboa yɛn.
15. Akwan bɛn so na Yehowa boa yɛn sɛ ankorankoro?
15 Ɛnde, ɔkwan bɛn so na Yehowa boa yɛn sɛ ankorankoro? Onyi nea ɛde yɛn amanehunu ba no mfi hɔ ankasa. Nanso, Yehowa ayɛ nsiesiei pii ama wɔn a wosu frɛ no de hwehwɛ mmoa no. N’asɛm Bible no de afotu a mfaso wɔ so ma a ebetumi aboa yɛn. Wɔ asafo no mu no, Yehowa ama yɛn ahwɛfo a wɔn ho akokwaw honhom fam a wɔbɔ mmɔden sɛ wɔbɛda n’ayamhyehye no bi adi akyerɛ bere a wɔboa wɔn mfɛfo gyidifo no. (Yakobo 5:14, 15) Sɛ́ “mpaebɔ tiefo” no, ɔde ‘honhom kronkron ma wɔn a wobisa no’ no. (Dwom 65:2; Luka 11:13) Saa honhom no betumi ama yɛanya “tumi a ɛboro so” sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi agyina kosi sɛ Onyankopɔn Ahenni beyi nneɛma a ɛhaw adwene nyinaa afi hɔ. (2 Korintofo 4:7) So yɛn ani nsɔ saa nsiesiei yi nyinaa? Mommma yɛn werɛ mmfi sɛ ɛyɛ Yehowa ayamhyehye a ɔda no adi.
16. Dɛn ne Yehowa ayamhyehye ho nhwɛso a ɛsen biara, na ɔkwan bɛn so na ɛka yɛn sɛ ankorankoro?
16 Nokwarem no, Yehowa ayamhyehye ho nhwɛso a ɛsen biara ne ne Dɔfo a ɔsen biara a ɔde no mae sɛ agyede maa yɛn no. Ɛyɛ afɔre a ɔdɔ wom a Yehowa bɔe, na ɛbɔɔ kwan maa yɛn nkwagye. Kae sɛ, agyede nsiesiei no fa yɛn ho ankasa. Ntease wom sɛ Sakaria, Yohane Osuboni no agya, ka siei sɛ saa nsiesiei yi maa ‘yɛn Nyankopɔn ayamhyehye’ daa adi kɛse no.—Luka 1:78.
Bere a Yehowa Nna Ayamhyehye Adi
17-19. (a) Ɔkwan bɛn so na Bible da no adi sɛ Yehowa ayamhyehye wɔ baabi a ekosi? (b) Dɛn na ɛmaa ayamhyehye a Yehowa wɔ ma ne nkurɔfo no sae?
17 So ɛsɛ sɛ yesusuw sɛ Yehowa ayamhyehye nni baabi a ekosi? Dabida, Bible da no adi pefee sɛ, sɛnea ɛfata no, Yehowa nna ayamhyehye adi nkyerɛ ankorankoro bi a wɔko tia n’akwantrenee no. (Hebrifo 10:28) Nea ɛbɛyɛ na yɛahu nea enti a ɔyɛ saa no, ma yɛnkae Israel man no nhwɛso no.
18 Ɛwom sɛ mpɛn pii na Yehowa gyee Israelfo no fii wɔn atamfo nsam de, nanso n’ayamhyehye baa awiei. Asoɔdenfo yi som abosom, na wɔde wɔn abosom a ɛyɛ atantanne no kɔɔ Yehowa asɔrefie mpo! (Hesekiel 5:11; 8:17, 18) Afei nso wɔka kyerɛ yɛn sɛ: “Wodii Onyankopɔn abɔfo no ho fɛw, na wobuu ne nsɛm no animtiaa, na wɔsereserew n’adiyifo no de kosii sɛ [Yehowa, NW] abufuhyew no sɔre hyɛɛ ne man no a wonnya ano aduru bio.” (2 Beresosɛm 36:16) Israelfo no duu baabi a na biribi pa biara nni hɔ a wobegyina so anya ayamhyehye ama wɔn, na wɔmaa Yehowa trenee abufuhyew sɔre hyɛɛ wɔn. Dɛn na efii mu bae?
19 Ná Yehowa ntumi nnya ayamhyehye mma ne nkurɔfo bio. Ɔkae sɛ: “Merenkyɛe wɔn so, na merenhu wɔn mmɔbɔ, na me yam renhyehye me a enti merensɛe wɔn.” (Yeremia 13:14) Enti, wɔsɛee Yerusalem ne n’asɔrefie no, na wɔfaa Israelfo nnommum kɔɔ Babilon. Hwɛ awerɛhosɛm a ɛyɛ sɛ nnipa abɔnefo tew atua araa ma ayamhyehye a Onyankopɔn wɔ ma wɔn no sae!—Kwadwom 2:21.
20, 21. (a) Sɛ Onyankopɔn ayamhyehye sa wɔ yɛn bere yi so a, dɛn na ebesi? (b) Nsiesiei a Yehowa fi ayamhyehye mu yɛ bɛn na yebesusuw ho wɔ ti a edi hɔ no mu?
20 Na ɛnnɛ nso ɛ? Yehowa nsakrae. Ofi ayamhyehye mu ama N’adansefo ahyɛde sɛ wɔnka “ahenni ho asɛmpa” no wɔ asase nyinaa so. (Mateo 24:14) Sɛ nnipa komapafo tie a, Yehowa boa wɔn ma wɔte Ahenni nkrasɛm no ase. (Asomafo no Nnwuma 16:14) Nanso, wɔrenkɔ so nyɛ adwuma yi daa. Ɛbɛyɛ nea ɛnkyerɛ ayamhyehye sɛ Yehowa bɛma wiase bɔne yi, emu ahokyere ne amanehunu nyinaa, akɔ so atra hɔ daa. Sɛ Yehowa ayamhyehye sa a, ɔbɛba abebu nneɛma nhyehyɛe yi atɛn. Ɛno mpo no, obefi ayamhyehye mu na ayɛ ade—ayamhyehye a ɔwɔ ma ne “din kronkron” ne n’asomfo a wɔwɔ ahofama no. (Hesekiel 36:20-23) Yehowa beyi abɔnefosɛm afi hɔ na ɔde wiase foforo a trenee te mu aba. Ɛdefa abɔnefo ho no, Yehowa ka sɛ: “M’aniwa renkyɛe so, na merenhu mmɔbɔ; mede wɔn kwan mebua wɔn atifi.”—Hesekiel 9:10.
21 Enkosi saa bere no, Yehowa bɛkɔ so anya ayamhyehye ama nkurɔfo, a wɔn a wɔrebɛsɛe wɔn no mpo ka ho. Abɔnefo a wɔanu wɔn ho nokware mu no betumi anya Yehowa nsiesiei a ofi ayamhyehye mu yɛ a ɛsen biara no mu biako—bɔne fafiri—so mfaso. Wɔ ti a edi hɔ mu no, yebesusuw Bible mu nsɛm a ɛyɛ dɛ a ɛma yehu sɛnea Yehowa fafiri wie pɛyɛ no ho.
^ nky. 3 Nanso, yebetumi ahyɛ no nsow sɛ wɔ Dwom 103:13 no, Hebri adeyɛ asɛm ra·chamʹ kyerɛ mmɔborohunu, anaa ayamhyehye a agya da no adi kyerɛ ne mma.
^ nky. 10 Nea asɛm ‘ɛyɛɛ ne kra ahometew’ no kyerɛ ankasa ne “ne yam hyehyee no; ne ho peree no.” The New English Bible kenkan sɛ: “Na ontumi nhwɛ Israelfo tebea no bio.” Tanakh—A New Translation of the Holy Scriptures ka no sɛ: “Na ontumi nnyina Israelfo awerɛhow no ano bio.”
Yeremia 31:20 Tema bɛn na Yehowa wɔ ma ne nkurɔfo, na eyi ma wote nka dɛn wɔ ne ho?
Yoel 2:12-14, 17-19 Dɛn na ɛsɛ sɛ Yehowa nkurɔfo yɛ na ama wɔahu wɔn mmɔbɔ, na dɛn na yesua fi eyi mu?
Yona 4:1-11 Ɔkwan bɛn so na Yehowa maa Yona suaa hia a ayamhyehye ho hia no ho ade?
Hebrifo 10:26-31 Dɛn nti na yentumi mfa Yehowa mmɔborohunu, anaa ayamhyehye nyɛ nea yɛpɛ?